Huawei သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အသံလက်ထောက်ဖြင့်အလုပ်လုပ်သည် Androidsis
ကျွန်တော်တို့ဟာ virtual voice assistants တွေအကြောင်းပြောတဲ့အခါချက်ချင်းသတိရလာမယ့်နာမည်နှစ်လုံးပါ အမေဇုံ Alexa y Google ကလက်ထောက်။ ဂူးဂဲလ်သည် Android စမတ်ဖုန်းအစိတ်အပိုင်းကိုဒေတာအခြေပြုလက်ထောက်ဖြင့်လွှမ်းမိုးထားစဉ် Alexa သည်စမတ်စပီကာအပိုင်းသစ်တွင်သူ့ကိုယ်ပိုင်နယ်ပယ်တစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, Huawei သည်မကြာမီပြိုင်ပွဲတွင်ပါဝင်နိုင်သည်.
၎င်းကိုပြင်းထန်သောနိမိတ်လက္ခဏာများကြောင့်မျှော်လင့်ရသည် နောက်ထပ် voice assistant သည်တရုတ်ကုမ္ပဏီမှဖြစ်ပြီးမကြာမီရောက်လာလိမ့်မည်ဒီယှဉ်ပြိုင်မှုဈေးကွက်မှာခြေကုပ်ယူရန်။
Huawei ၏ Consumer Electronics ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Richard Yu သည် CNBC မှသီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ သူကအောက်ပါအတိုင်းပြောကြားခဲ့သည် -“ အစပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Google Assistant နှင့် Amazon Alexa ကိုသူတို့၏ AI Cube နှင့်၎င်းတို့၏စမတ်ဖုန်းများအတွက်အဓိကအသုံးပြုသည်။ ” ထို့အပြင်သူသည်“ ကျွန်ုပ်တို့၏အတုဥာဏ်ရည်တုတုန်ဆောင်မှုများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အချိန်ပိုလိုအပ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပ၌၎င်းကိုချဲ့ထွင်လိမ့်မည်။
Huawei တွင် XiaoYi ဟုခေါ်သောတရုတ်ဗဟိုပြုအသံလက်ထောက်ရှိပြီးဖြစ်သည်Xiaomi ၏အလားတူအမည် Xiao AI နှင့်မရောထွေးရန်။ ကမ္ဘာ့နံပါတ် ၂ အမှတ်တံဆိပ်သည်မကြာသေးမီကပင် Huawei AI Cube ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကုမ္ပဏီ၏ပထမဆုံး AI စပီကာဖြစ်သည်။ Yu သည်သူတို့၏အသံလက်ထောက်သည်အချိန်နှင့်အမျှအဆင်သင့်မဖြစ်မချင်းသူတို့၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များတွင် Google နှင့် Amazon ၏ကမ်းလှမ်းချက်များကိုဆက်လက်အသုံးပြုလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ (ပိုမိုရှာဖွေ: အမေဇုံ Alexa Vs Google Assistant, Android မှလက်ထောက်များ).
အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကကြေငြာသော်လည်း အသံလက်ထောက်အကြောင်းကိုအများကြီးမသိရသေးပါ။ ၎င်းကိုပွဲ ဦး ထွက်တွင်မည်သည့်ဘာသာစကားနှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်စတင်မည်၊ မည်သည့်အချိန်တွင်စတင်မည်၊ မည်သည့်တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပ၌ခေါ်ဆိုမည်ဆိုသည့်အချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်မရှိပါ။ သို့ရာတွင်အသံလက်ထောက်များ၏လူကြိုက်များလာမှုသည်တရုတ်iantရာမကုမ္ပဏီ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်အပိုင်းအစတစ်ခုလိုချင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Huawei သည်၎င်း၏ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သောအသံလက်ထောက်ကိုပြင်ဆင်သည်